Keeg jilicsan oo jilicsan (cunto karinta) + kala duwanaanta midabka - Keega
Keeg jilicsan oo jilicsan ayaa ah keeg jilicsan, jilicsan oo leh calaamado subag iyo vanilj
Keeg jilicsan oo jilicsan ayaa ah maro jilicsan oo casaan ah ‘Walaasheed yaroo quruxsan. Keega jilicsan ee jilicsan ayaa soo jirtay da 'ahaan waxaana laga yaabaa inuu yahay mid ka mid ah dhadhanka keega ee ugu caansan waqtiga oo dhan. Laakiin ma aha in qof kastaa doonayo inuu cuno midabaynta cuntada cas ama haddii kale waxay leeyihiin shuruudo gaar ah oo cunto ah oo aan u oggolaanayn inay cunaan dheeha cuntada casaanka ah. Sabab kasta ha noqotee, ikhtiyaarrada ayaa had iyo jeer wanaagsan.
Dad badan ayaa isweydiiya inaad iska dhaafi karto midabka cuntada casaanka ah oo aad heli karto maro jilicsan oo cad jawaabtuna waa haa, waa iska caadi. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ka tagto budada kookaha. Dhammaan waxyaabaha ka dhigaya keega jilicsan ee jilicsan macaan ayaa lagu tagi karaa.
sidenote… kolba sida aan u higgaaddo erayga 'jilif' weirder waxay u egtahay velvet. VELVET jilicsan Wuxuu bilaabayaa inuu qalad u muuqdo
subag caano ah oo macaan rootiga rootiga macaan
Laakiin si kasta…
Waa maxay keega jilicsan ee jilicsan?
Keeg jilicsan oo jilicsan ayaa asal ahaan jilicsan jilicsan oo aan casaan lahayn. Waa aasaaska keega subagga caanaha ka sameysan taas oo keeneysa keeg aad u jilicsan, jilicsan oo qoyan. Haddii aad ka tagto dhammaan midabka iyo budada kookaha waxaad naftaada u leedahay keeg fiican oo jilicsan oo jilicsan. Hagaagsan Caanaha subagga ayaa siiya keeggan koonfurta waxyooday waa qani iyo dhar jilicsan.
Keegga jilicsan ee jilicsan ee casaanka ah ayaa ku jira xoogaa budada kookaha ah. Qaarkood waxay kuu sheegi doonaan in velvet-ka casaanku dhab ahaan yahay keeg shukulaato ah (qalad ah) ama ay tahay uun keeg cad oo leh midab casaan leh oo lagu daray (si qaldan). Budada kookaha waxay ku dartaa xoogaa dhadhan keegga laakiin kuma filna in loogu yeero shukulaatada marka markaad ka tagto, saameyn kuma yeelanayo dhadhanka intaa le'eg.
Maxay ku fiican tahay maro jilicsan?
Marka mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan cuntadan, sidaan qabo, waa qaabka. Jajabka waa mid jilicsan oo jilicsan oo jilicsan! Waan jeclahay sida ay u egtahay markaad jareyso. Jilicsan iyo barkin. Waa sidii sixir!
Waa maxay Subagga Caanaha?
Buttermilk asal ahaan waa caano qallalan oo qadhaadh noqday. Waan ogahay inay u muuqato wax la yaab leh laakiin dhab ahaantii waxay ku dhadhamineysaa wax la yaab leh alaabta la dubay. Taabashada ku jirta caano subag waxay ku dareysaa dhadhan weyn iyo aashitada ku jirta caano-maalmeedka ayaa runti burburiya maadada 'gluten' sidaa darteed waxyaabaha la dubay way ka jilicsan yihiin haddii aad caano caadi ah isticmaali jirtay.
Waxaan ula jeedaa, waxaa jira sababaha cuntada sida 'canjeelada buttermilk' iyo buskudka 'buttermilk' marwalba waxay umuuqdaan kuwa kafiican just canjeelada. Ya ogyahay?
Ma lihid wax caano subag ah? Waad sameyn kartaa! Ku dar 1 qaado oo khal khal ah 1 koob oo caano caadi ah, walaaq oo ha fariisiso ilaa 10 daqiiqo. Waxaad arki doontaa caanuhu inay bilaabaan inay dhumuc yeeshaan oo ay curyaamiyaan. Voila. Caanaha subagga ee guriga lagu sameeyo.
Sidee u dhadhamiyaa keegga jilicsan ee jilicsan
Keeg jilicsan oo jilicsan ayaa dhadhamiya si la yaab leh WAAYO caano-maalmeedka! Kaliya waxay ku dareysaa xoogaa tang iyo zip oo sababo jira awgood dhadhankaaga kaliya uu jecel yahay.
Burburku waa mid aad u fiican sida tayda karinta keega cad ama tayda karinta keega vanilj runtiina waa keeg weyn oo loogu talagalay dhadhanka si loogu kariyo munaasabad gaar ah.
Muxuu qabowgu la socda keegga jilicsan ee jilicsan?
Qabowga dhaqameed ee la socda keega jilicsan ayaa ah qabowga ermine. Qaboojiyaha 'Ermine' waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu karsado sonkor xoogaa bur ah kadibna lagu rido subag jilicsan.
Qaboojiyaha 'Ermine' waa mid aad u shiidan, oo aan aad u macaaneyn oo dhadhan fiican leh keega jilicsan ee cad. Aniga aragtidayda waxay u dhadhameysaa si aad ah oo la mid ah subagga loo yaqaan 'swiss-meringue buttercream' laakiin ukunta la'aanteed markaa waa ikhtiyaar fiican haddii aad ukumo xasaasiyad ku leedahay.
Sideed u sameysaa keeg buluug ah oo jilicsan?
Si aad u sameysid keega buluugga ah ee buluugga ah, si fudud ugu dar 1 oz oo ah midabka buluugga ee korontada ku shaqeeya (loogu talagalay keeg buluug khafiif ah) ama midab buluug ah oo buluug ah (buluug mugdi ah) salka loo yaqaan 'velvet white white'.
Buluug dabiici ah, ku dar 1-2 tsp oo ah budada kookaha dabiiciga ah (ma ahan mid la jilciyay. Waxaan jeclahay mugdiga gaarka ah ee Hershey) Budada kookaha ayaa yareyn doonta buluuga dhalaalaya wax yar sidaa darteed ma ahan mid sidaas u sii VIVID ah oo sameysanaya buluug dabiici ah oo wanaagsan. Ama hadaad rabto buluug runtii dhalaalaya waad ka tagi kartaa budada kookaha banaanka.
sida loo sameeyo kalgacal fudud oo keega ah
Buluug buluug ah ayaa ah keeg weyn oo loogu talagalay muujinta jinsiga, keegga dhalashada ama sababtoo ah maro jilicsan oo buluug ah ayaa cabsi leh.
Miyaad sameyn kartaa keeg jilicsan oo midabyo kala duwan leh?
Haa! Haddii aad rabto midab ka duwan keega jilicsan ka dibna si fudud ugu beddel midabka cuntada midab kale oo aad jeceshahay. Waxaad sameyn kartaa a qaanso roobaad cad oo jilicsan , ombre ama raac neon. Fursadaha midabku waa kuwo aan dhammaad lahayn!
Waxaan u sameeyay keeggan quruxda badan ee cagaaran ee jilicsan ee loo yaqaan 'pat pat day'! Waxaan ku daray budada kookaha si aad u hesho hadh dabiici ah oo cagaar ah waxaanan isticmaalay 1 oz oo ah caleenta cagaaran americolor cuntada midabka leh.
Ka waran keegga jilicsan ee jilicsan?
Waayahay markaa FARSAMO Waxaan hayaa cunto kale oo la yiraahdo keega jilicsan ee madow taas oo aan adeegsan saldhigan keega jilicsan. Sababta Sababtoo ah runtii waa keeg shukulaato ah. Kuma dhex jirto wax caano subag ah, khal ama midabaynta cuntada! Marka maxaad xitaa dhib ugu yeereysaa inaad ugu yeerto maro jilicsan?
Waa hagaag waxay heshay dhar jilicsan oo jilicsan. Mustaqbalka waxaan ku sii tijaabin karaa runta jilicsan ee jilicsan ee madow oo ka shaqeyneysa rootiga jilicsan ee jilicsan laakiin kor u qaadaya budada kookaha. Fikrado badan oo keeg ah, waqti aad u yar.
Cake Velvet Madow
Cake Velvet Casaan
Keeg jilicsan oo jilicsan ayaa ka helaya dhadhanka iyo jilicsanaanta jilicsan caanaha subagga. Keeg qoyan oo jilicsan oo ku fiican munaasabad kasta oo gaar ah. Cuntadani waxay ka dhigeysaa laba 8 'keega wareega ah oo ku saabsan 2' dheer. Waxay u adeegtaa 24 Kari 335F 30-35 daqiiqo ilaa cadayga uu si nadiif ah uga soo baxayo. Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:40 daqiiqado Wadarta Waqtiga:40 daqiiqado Kalori:208kcal
Waxyaabaha Cake Velvet Cake
▢14 oz (396 g) bur keeg
▢13 oz (368 g) sonkorta granulated
▢1 Tbsp budada dubista
▢5 oz (142 g) ukun cad heerkulka qolka
▢4 oz (113 g) saliidda cuntada
▢10 oz (284 g) caano subag heerkulka qolka ama in yar diiran
▢6 oz (170 g) subag aan cusbo lahayn oo jilicsan
▢laba tsp vanilj
▢14 oz (396 g) sonkorta granulated
FIIRO GAAR AH: WAA MUHIIM IN dhammaan waxyaabaha heerkulka qolka ee kor lagu soo sheegay ay yihiin heerkulka qolka oo lagu cabiro culeys si maaddooyinka ay isugu qasmaan oo ay si sax ah isugu daraan. Foornada kuleylka illaa 335º F / 168º C - 350º F / 177º C. Waxaan u jiheystaa inaan isticmaalo goob hoose si aan uga hortago keegagtayda inay aad ugu sii madoobaan banaanka ka hor intaysan gudaha ku dubin dubista.
Diyaarso labo 8'x2 '(ama seddex 6') oo keeg ah (oo leh xoogaa yar oo haraaga ah) oo leh keeg goobeed ama lagu buufiyo digsiga. Buuxi weelkaaga qiyaastii 3/4 ee dariiqa buuxa ee batteriga.
Isku dar bur, sonkor, budada dubista, soodhaha iyo milixda baaquli ee .a istaag fiicni leh lifaaqa daboolka. Isku qas 10 sekan si aad isugu darto.
Isku dar 1/2 koob oo caanaha ah iyo saliida isla markaana dhinac iska dhig.
Isku dar caanaha haray, ukunta cad iyo vaniljka si wadajir ah, u garaac si aad ukunta u jajabiso oo aad dhinac u dhigto.
Ku dar subaggaaga jilicsan walxaha qallalan oo isku walaaq hoose illaa isku darku u eg yahay ciid aan dhab ahayn (qiyaastii 30 sekan). Ku dar caano / saliid isku dar ah iskuna dar isku dar ilaa walxaha qallalan ay qoyaan ka dibna ku boodaan ilaa med (dhig 4 on my kitchenaid) oo ha isku qas ilaa 2 daqiiqo si ay u horumariyaan qaab keega. Haddii aadan u oggolaan keeggaaga inuu ku qasmo talaabadan keegaaga ayaa burburi kara.
Mar labaad xoq dhinacyada si aad u hubiso in wax waliba ay isku darsameen ka dib ku shub digsiyo diyaarsan. Waxaad karisaa 35-40 daqiiqo ilaa caday la geliyay bartamaha uu si nadiif ah u soo baxayo laakiin keeggu wali ma uusan bilaabin inuu ka gaabiyo dhinacyada dhinacyada saxanka. WAQTIGA WAAYO KU DHAQO WADAAD SHARCIGA markabka korkiisa si aad u sii deyso uumiga keega. Tani waxay joojineysaa keegga inuu yaraado.
Keega ha ku qaboojino 10 daqiiqo gudaha digsiga ka hor inta uusan soo daadin. Keegga ayaa yara yaraanaya taasna waa caadi. Ku siib sariir qabooji oo si buuxda u qabooji. Waxaan qaboojiyaa keegayaga ka hor inta aanan gacanta ku dhigin ama waad ku duubi kartaa duubka balaastigga ah oo aad ku qaboojin kartaa si qoyaanka buskudku ugu soo dhacaan. Ku dhalaasho miiska dushiisa adoo weli ku duudduuban dhaxan ka hor.
Ku shiid burkaaga iyo sonkorta digsi dhexdhexaad ah digsi kuleyl dhexdhexaad ah. Karso ilaa 2 daqiiqo si aad u dubto burka.
MUHIIM: Hubi in dhammaan waxyaabaha aad ka kooban tahay ay ku jiraan hawo qolka oo aad isticmaaleyso cabir aad ku cabirto. Beddelashada maaddooyinka ayaa sababi kara in karintani ay fashilanto. (fiiri qoraalada qeybta hoose ee cuntada) Waxyaabaha Muhiimka ah ee ay Tahay inaad Ogaato Kahor Intaadan Bilaabin 1. U soo qaado dhammaan waxyaabaha aad ka kooban tahay heerkulka qolka ama xitaa xoogaa diiran (ukumo, caano subag, subag, iwm) si loo hubiyo in dubkaagu uusan jebin ama uusan curricamaynin. 2. U adeegso cabir si aad u miisaanka maaddooyinkaaga (oo ay ku jiraan dareerayaasha) haddii aan si kale loo faraynin (Qaadooyinka, qaadooyinka, qayilaada iwm). Qiyaasaha mitirka ayaa laga heli karaa kaarka cuntada. Maaddooyinka miisaanka ku jira ayaa aad uga saxsan isticmaalka koobabka waxayna kaa caawinayaan hubinta guusha cuntadaada. 3. Layliska Mise en Place (wax kasta oo meesha ku jira). Cabbiro maaddooyinkaaga ka hor wakhtiga oo diyaari iyaga ka hor inta aanad bilaabin isku-darka si loo yareeyo fursadaha si shil ahaan wax uga tagi kara. 4. Qabooji keegaaga ka hor dhaxan iyo buuxin. Waad ku daboolan kartaa keega barafoobay oo la qaboojiyey ee xiisaha leh haddii aad rabto. Keeggan sidoo kale waa u fiican yahay isku dhejinta. Had iyo jeer waxaan ku hayaa keegayaga in aan ku qaboojiyo qaboojiyaha ka hor intaan la keenin si loogu qaado gaadiid fudud. 5. Haddii cuntada lagu kariyo ay ku baaqeyso waxyaabo gaar ah sida burka keega, ku beddelashada dhammaan ujeeddada bur iyo galleyda laguma talinayo haddii aan lagu caddeyn karinta inay ok tahay. Beddelashada maaddooyinka ayaa sababi kara in karintani ay fashilanto.
U adeegida:1adeegaya|Kalori:208kcal(10%)|Kaarboohaydraytyada:kow iyo labaatang(7%)|Protein:1g(laba%)|Dufan:13g(labaatan%)|Dufan Dufan:8g(40%)|Kalastarol:28mg(9%)|Sodium:111mg(5%)|Kaliumperyamper:60mg(laba%)|Sonkor:shan iyo tobang(17%)|Vitamin A:335IU(7%)|Kaalshiyam:31mg(3%)|Bir:0.2mg(1%)
cuntooyinka keega jilicsan ee jilicsan ee xoqan laga soo bilaabo xoq
Cunto macaan oo casaan ah oo jilicsan oo laga sameeyay xoq
ku daboolaya keeg leh shukulaatada tusaalaha ah
sida ukunta loogu karkareynkaro guriga